JENERALY NOEL RAKOTONANDRASANA : Taratasim-bola hita tao an-tranony
Misafotofoto be ihany ny resaka manodidina ny fisavana ny tranon’i Jeneraly Noël Rakotonandrasana, anisan’ireo nikasa hanogam-panjakana, izay nitolo-batana ny sabotsy lasa teo. 24 novembre 2010
Araka ny loharanom-baovao voaray, dia taratasim-bola maromaro no hitan’ireo mpitandro ny filaminana tao an-tokantranony. Ar 200 tapitrisa ny iray, Ar 16 tapitrisa ny taratasim-bola iray hafa ary Ar 3 tapitrisa ny iray hafa.
Arak’io loharanom-baovao io ihany dia vola Ar 75 tapitrisa, izay an’ny Raimandreny mijoro ankoatra ireo taratasim-bola ireo ihany koa no hita nandritra ity fisavana ny tranon’ny Jly Noël Rakotonandrasana.
Marihana fa mpitam-bolan’ny Raiamandreny mijoro ny Jly Noël. Ny loharanom-baovao hafa aza dia milaza fa tsy tao an-tokantranon’ny jeneraly no nahitana ireo vola ireo fa tany amin’ny letnà iray, izay havany ihany.